Degso Autobahn Police Simulator 2 loogu talagalay Windows
Degso Autobahn Police Simulator 2
Degso Autobahn Police Simulator 2,
Autobahn Police Simulator 2 waa ciyaar jilitaan oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay u dhaqmaan sidii sarkaal booliis oo ay noqdaan ilaaliyaha sharciga ee aan adkayn.
Waxaan abuuri karnaa geesiyaheena markii aan bilowno Autobahn Police Simulator 2, ciyaar booliis oo soo dhaweyneysa ciyaartooyda waddada ugu dhaqsaha badan Yurub. Ka dib markii aan abuurnay geesigeena, waxaan ku dadaalnaa inaan ku dhaqano sharciga oo aan kor u qaadno annaga oo qabanayna hawlihii naloo siiyay xirfadeena booliiska. Waxaan ku bilaabeynaa ciyaarta saldhig booliis waxaanna ku dhaqaaqnay annagoo ka soo qaadneyna howlaha halkan. Markaan dhammaystirno hawlgallada, waxaan hagaajin karnaa goobtan furan oo aan furi karnaa hawlgallo iyo fursado cusub.
Hawlgallo kala duwan ayaa nagu sugaya Autobahn Police Simulator 2. Mararka qaarkood waxaan daba -galnaa booliiska baabuurta dhaaftay xadka xawaaraha ee waddada weyn. Mararka qaarkood waxaan galbineynaa gawaari muhiim ah ama waxaan sugnaa ammaanka goobta shilka. Weydiimahan ayaa si aan kala sooc lahayn u muuqda. Waxaa suurtogal ah inaan darajadeenna kor u qaadno markaan dhammaynno ergooyinka.
Waxaa noo suurtogal ah inaan hagaajinno gawaarideena iyo qalabkeenna ku jira Simulator Police Autobahn 2. Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Autobahn Police Simulator 2, ciyaar jilid-adduun oo furan, waa sida soo socota:
- 3 GHz processor quad core
- Nvidia GeForce GTX 760 ama kaarka fiidiyaha oo u dhigma 1GB xusuusta fiidiyaha
- 20GB ee kaydinta bilaashka ah
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Police Simulator
Autobahn Police Simulator 2 Noocyada